Analamahitsy – Fanafihana ny « Perception » : Jiolahy telo maty voatifitra, iray azo sambo-belona
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2014 → mars → 18 → Analamahitsy – Fanafihana ny « Perception » : Jiolahy telo maty voatifitra, iray azo sambo-belona
Tsy lavitra ny toerana nangalarany no lavon’ny balan’ny mpitandro filaminana ireo mpangalatra.
Nisy tamin’ireo mpandroba no tafatsoaka ary voalaza fa efa nahazo vola ihany koa. Nisahotaka indray ny teny amin’ny faritra Analamahitsy omaly hariva tokony ho tany amin’ny 7 ora tany ho any. Nanakoako ny feom-basy mahery vaika. Tsy ela dia fantatra fa nisy nanafika tao amin’ny toerana fandoavam-bola, ny “Perception” eny an-toerana. Vokany, jiolahy telo no hita maty voatifitra nitsirara teo amin’ny arabe ary nisy iray azo sambo-belona. Nisy tamin’ireo olon-dratsy koa anefa tafatsoaka nihazo ny elakelatrano maro eny an-toerana ary nifanenjehana hatrany Ambatobe sy Ambohitrarahaba ary Nanisana.Tsy nisy tratra izy ireny fa tafaporitsaka avokoa. Mbola ny vaovao hatrany no nahalalana fa efa nisy vola lasan’izy ireny. Mikasika ireo mpiasa tao amin’ny “pereption” indray dia fantatra fa nanao be miditra ireo mpandroba. Voambana basy ary tsy nisy afaka nanao na inona na inona ry zareo; Avy hatrany dia nofatorana sy notapenana “scotch” ny vavany. Nisy aza voalvely vodibasy. Rehefa izany dia naka ny vola rehetra ireo jiolahy. Tamin’io fotoana io dia niasa hariva ireo olona ireo satria anio maraina faha-18 martsa no fandoavana ny volan’ireo beantitra mpandray “pension”. Teo am-pikarakarana izany indrindra ry zareo no niditra ny jiolahy. Rehefa azon-dry zalahy ny vola dia niomana ny handositra izy ireo.
Efa vonona ny mpitandro filaminana. Tamin’ny resaka fohy natoan’ireo tompon’andraikitry ny filaminana tonga teny an-toerana tamin’ny mpanao gazety no nahafantarana fa efa nahazo vaovao mikasika ny fanafihana izy ireo. Tsy dia ny tao Analamahitsy loatra anefa no fantatra tamin’izay fa toeran-kafa. Na izany aza anefa dia efa niomana hatrany hiatrika izay zavatra mety hiseho ny polisy ary nisy ny vonona tamin’izany. Nalefa tamin’ny teorana maro izy ireo. Vao niseho ny fanadrobana dia efa nisy ireo tonga teny Analamahitsy. Efa handeha handositra ireo jioloahy tamin’izay no nifanehatra tamin’ireo mpitandro filaminana. Raikitra ny fifampitifirana. Nihorohoro ny mponina, nitohana avy hatrany ny fifamivoizana. Ny iray tamin’ireo mpangalatra voatifitra tao anaty taxi saika handosirany. Ny roa tsy lavitra ny vavahady miditra ao amin’ilay “perception”. Teo ihany koa no nahazoana ny iray. Tratra tamin’izy ireo ny entana anaty fonosana vitsivitsy. Voalaza fa vola no tao anaty gony iray. Nisy kitapo koa teo izay heverina fa mbola misy basy. Nisy basy kalach iray niaraka tamina bala 10 miampy PA iray sy bala ihany koa hita teo amin’ny arabe teo. Ho an’ireo mpitandro filaminana izay nanao ny asany teny, tsy nisy ny naratra tamin’izy ireo na dia navaivay aza ny fifanandrinana tamin’ny mpandroba.
Tonga teny an-teorana ihany koa ireo mpanao gazety marobe raha vao nahafantatra ny zava-nisy. Tsy mbola afaka niditra nivantana teny amin’ny toerana nisehoan’ny fanafihana anefa izy ireo raha tsy afaka fotoana elaela. Dia nandeha teo ny resaka re tamina olon-tsotra fa mbola misy olona tazonin’ny jiolahy tao amin’ilay birao.